Ny tontolo an-tsekoly dia mametra raha azo antoka ny tontolo iainana sy ara-batana sy ara-pihetseham-po ho an&#39;ny mpianatra mba hamolavola fahombiazana sy fitomboana. Ny tontolon&#39;ny sekoly dia mamantatra ny isan-jaton&#39;ny mpianatra mandray ny karazan&#39;asa famaizana rehetra ao am-pianarana, ary ny isan&#39;ny fiarovana sy ny fitsipi-pifehezana mitranga mandritra ny taom-pianarana amin&#39;ny sekoly. Ny tranga fiarovana sy fifehezana dia voasokajy ho toy ny fampiatoana, fandroahana ary fampitahorana araka ny notaterin&#39;ny sekoly momba ny Fifehezana. (Loharanom-baovao: taom-pianarana 2018-2019)
Ahoana no fandraisan&#39;i Indiana ny fihetsiky ny mpianatra?
Ny tontolo an-tsekoly dia mametra raha azo antoka ny tontolo iainana sy ara-batana sy ara-pihetseham-po ho an&#39;ny mpianatra mba hamolavola fahombiazana sy fitomboana.
Amin&#39;ny fampiatoana ny sekoly
Avy amin&#39;ny fampiatoana ny sekoly
Fisamborana mifandraika amin&#39;ny sekoly
Black / Afrikana-Amerikana:
Hawaiian na Pacific Islander:
Mpianatra manana fahasembanana:
Rondro momba ny fampiharana ny lalàna
Lozan&#39;ny fiarovana sy ny famaizana
Ianaro bebe kokoa momba ny angon-drakitra momba ny zon&#39;ny sivily. https://ocrdata.ed.gov/